SAWIRRO:-Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukun Riday – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASAWIRRO:-Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukun Riday
SAWIRRO:-Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukun Riday
November 5, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on SAWIRRO:-Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukun Riday
Maxamed Xaashi Waasuge Cosoble (Oday Daalay) ayaa loo heystaa in uu dil bareer ah u geystay Marxuum Saciid Cusmaan Maxamed oo ay kawada tirsanaayeen Ciidamada Amniga dilkaasi oo ka dhacay dugsiga taba-barka Jen. Shirbow 30-ka bishii sideedaad ee sanadkan.
Hey’adda dambi baarista Boliiska CID ayaa codsatay in la siiyo waqti ku filan oo ay ku soo dhameystiraan eedda loo heysto Oday Daalay, waxa ayna Shan Cisha Kadib ku wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Side.
Xeer Ilaalinta ayaa weydiistay garsoorayaasha Maxkamadda Ciidamada in loo gudbiyo xabsiga dhexe gar-suge ahaan Maxamed Xaashi Waasuge Cosoble (Oday Daalay) 6-da bishii sagaalaad si’ay u soo dhameystireen baarista eedda ka dhanka ah eedeysanaha ee xafiiska soo gaartay.
18-ka bishii tagtay ayay markale weydiisteen Garsoorayaasha in la muddeeyo waqtia dacwad qaadisata eedeysane Maxamed Xaashi Waasuge Cosoble (Oday Daalay) oo ay sheeeen in ay ku filantahay caddeymaha ay u hayeen kiiskiisa, waxa ayna Maxkamadda aqbashay laba maalin uun kadib.
Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada ayaa fadhiga Maxkamadda hor keenay Afar markaati oo dhammaantood isku raacay in Maxamed Xaashi Waasuge Cosoble Oday Daalay uu si bareer ah u dilay Marxuum Saciid Cusmaan Maxamed kadib markii uu isku dayay in uu carqaladeeyo shaqo amni uu haayay Marxuumka isla markaasna uu isku dayay in uu baxsado balse ay ciidamada oo ka tir badnaa ay hareereeyeen sidaasna qoriga uu dilka ku geystay looga qaaday.
Abuukatayaasha u dooday eedeysane Maxamed Xaashi Waasuge Cosoble (Oday Daalay) ayaa iyagana ku dooday in loo fududeeyo ciqaabta lagana qaado magta Marxuumka.
Cabdirisaaq Maxamed Jimcaale ayaa isagana loo heystaa dilka Qeys Khaliif Salaad oo ay kawda tirsanaayeen Ciidamada Xooga Dalka, dilkaasi oo ka dhacay xirada Laanta-buure 27-ka bishii todobaad ee sanadkan.
30-bishii todobaad ayay ku soo wareegtay eediisa xafiiska xeer ilaalinta, waxaana xilligaas ay maxkamadda u ugudbisay xabsiga dhexe gar-suge ahaan.
10-ka bishii tatay ayay xeer ilaalinta codsatay in la muddeyo dacwad qaadista eedeysane Cabdirisaaq Maxamed Jimcaale 15-ka bishaas ayay aqbashay Maxkamadda, waxaana shan cisha kadib loo fariistay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah eedeysanaha.
Laba markaati, Warqadda dhimashada, sawrika marxuumka iyo qorigiis uu dilka ku geystay ayay ku soo bandhigeen xeer ilaalinta, waxa ayna markaatiyaasha oo ay kawada tirsanaayeen ciidanka xoogga dalka ee isku goobta ay yihiin cadeyn in si jees-jees ah uu u dilay Marxuumka halka dhanka qareenada ay ku doodeen in laga qaado diyo maadaama ay wada kaftamayeen marxuumka sidaasna ay sababtay dhimashadiisa.
Garsoorayaasha ayaa si wada jir ah ugu xukumay dil Maxamed Xaashi Waasuge Cosoble (Oday Daalay) & Cabdirisaaq Maxamed Jimcaale kadib markii ay ku qanceen cadeymaha labada kiis ee Maxkamadda la hor keenay sida uu u sheegay dhamman dhinacyada ka qeyb galayay dacwadda Gaashaanle dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan (Wabiyow) oo kamid ah garsoorayaasha Maxkamadda Ciidamada.
Sawirro:-Wakiilka QM Oo Gaaray Soomaaliland Lana Kulmay Muuse Biixi
DHAGEYSO: Galmudugta Cadaado oo ka hadashay Gawaari ay xanibeen
709,355 total views, 6,572 views today
709,355 total views, 6,572 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
709,230 total views, 6,571 views today
709,230 total views, 6,571 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
709,260 total views, 6,571 views today
709,260 total views, 6,571 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
709,323 total views, 6,572 views today
709,323 total views, 6,572 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
709,377 total views, 6,572 views today
709,377 total views, 6,572 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]